Maxaad ubaahan tahay inaad ka fili karto shirkadda wax soo saarka xirfadeysan?
Weligaa ma yaabay waxa shirkada wax ku oolka raadinta sameyneyso? Maalmahan, xirfad u leh aqoon yahan SEO ah ayaa sare u qaadaya su'aalo badan maaddaama xirfadlayaashu ay sameeyaan hawlo badan oo adag oo caawinaya in lagu daro boggaaga sare SERP. Si aad u fahamto waxa aan u baahannahay inaan ka filanno shirkad dejinta, waxaan u baahannahay inaan ka soo baxno goobta. Maqaalka this, waxaan ku siin doonaa aragti ah ee search engine engine optimization iyo muujiso waxa khubaro SEO sameeyaan si ay u horumariyaan website-ka macmiilka. Waxaan jeclaan lahaa inaan bilawdo maqaalkan iyada oo tilmaantay in ay jiraan afar meelood oo waaweyn oo wadooyinka ah: dabiici (raadin), u diritaan, lacag iyo bulsho. Si kastaba ha noqotee, taraafikada dabiiciga ah ayaa ah kuwa ugu muhiimsan taribuunka. Waxay micnaheedu tahay in gaadiidka intaa le'eg ee aad ka heshay raadinta raadinta ee keywords key niche, fursadaha weyn ee lagu beddelo booqashooyinka iibsashada iibinta iyo dakhliga.
Tusaale ahaan, waxaad leedahay shey shakhsi ahaaneed, oo aad jeceshahay inaad kobciso internetka. Waxaad doortay magac domain ah iyo hindise-yaqaano xirfadleyaal ah oo shaqaaleeyay kuwaas oo dhisaya bogga ama bogga soo degaya adiga. Your site ayaa la bilaabay. Si kastaba ha ahaatee, dabcan, ma helaysid socodka gaadiidka ee domainka markiiba. Oo waxaad bilowdid inaad isweydiiso su'aalahan soo socda: "Yaa ogaanayaa aniga iyo amarkayga aan ku soo bandhigay websayd?", "Miyay dadka isticmaalaan wax ku saabsan calaamadeyda?" Iyo "Sidee baan u wanaajin karaa aqoonsigayga brandka oo soo jiidata dad badan oo booqanaya Ilahayga Shabakadayda? ".
Dhammaan su'aalahaan waxaa ka jawaabi kara lataliye SEO ah ama shirkad dejinta. Sidaa daraadeed, marxaladda soo socota ka dib markii bogga internet-ka la soo saaro waa website-ka-fududaynta iyada oo la raacayo dhammaan heerarka farsamayaasha raadinta. Haddii aad go'aansato inaad ballaadhiso suuqyadaada oo aad kor ugu qaaddo sifooyinkaada, markaa waxaad u baahan tahay inaad kireysato shirkad lagu kalsoonaan karo. Koox khubaro ah ayaa kugu hoggaamin doona habka aad ku guuleysan kartid.
Waa maxay shirkad dejinta?
Shirkadaha SEO waxay leeyihiin hab ka duwan mashruuc kasta oo ay ka shaqeeyaan. Ka hor inta aaney bilaabin ololeynta wax-qabadka, waxay caadi ahaan sameeyaan falanqaynta suuqa iyo qiimeyn tartameed. Habka mashruuc online ah oo gaar ah wuxuu sidoo kale ku xiran yahay baaxadda ololaha, niche, miisaaniyad, iyo dhinacyo kale oo aasaasi ah.
Ugu horreyntii, shirkad ka shaqeynteedu waxay qabataa falanqaynta dhismaha. Google iyo mashiinnada kale ee dunida oo dhan sida Yahoo iyo Bing waxay xooga saaraan in ay kuxiriyaan goobo wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala halkii ay ka noqon lahaayeen matoorada raadinta. Websaydhkaagu waa inuu si fiican u qaabeysan yahay oo si sahlan u socdaa. Si kastaba ha ahaatee, waa in sidoo kale si habboon loo habeeyey makiinadaha raadinta si ay u kala saaraan content. Sidaa darteed, khubarada SEO ayaa bixiya xeeladaha soo socda si aad u hagaajisid dhismahaaga goobta:
hagaajinta khaladaadka goobta;
hirgeliya Robotka. faylka txt;
hagaajinta xaaladdaada index;
hirgelinta website-ka XML;
hagaajinta xawaaraha boggaaga;
waxay sare u qaadaan halbeegyada macdanta.
Marxaladda soo socota ee bogsashada bogga waa falanqayn ku saabsan mawduuca. Munaasabaddan, khubarada SEO ayaa si wadajir ah ula shaqeeya ganacsadaha macaamiisha si ay u abuuraan content gaar ah oo ku habboon. Waxaa intaa dheer, waxay hubiyaan waxyaabaha aad horey u heysatid boggaaga oo aad u hagaajiso haddii ay jirto baahi. Intaa waxaa dheer, khabiirada SEO waxay xallinayaan sida arimaha sida mawduucyada kala duwan, bogagga maqan, iyo bogagga darajada liita Source .